War deg deg ah:- qofkii ugu horeeyay ee caabuqa Corona oo laga helay Soomaaliya – Geelle Magazine
War deg deg ah:- qofkii ugu horeeyay ee caabuqa Corona oo laga helay Soomaaliya
War goordhoweyd kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta kiiskii ugu horeeyay ee Fayruska Corona laga helay Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa sheegtay in gudaha dalka uu soo gaaray Caabuqa Coronavirus ee addunka kusii faafaya.
Wasiirada ayaa sheegtay in ay xaqiijiyeen in qofkii ugu horeeyay laga helay caabuqa Coronavirus, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in qofkaasi uu ahaa shaqsi ka yimid dalalka uu caabuqa ka jiro, baaritaan lagu sameeyay kadibna maanta laga helay.
“Maanta oo taariiqdu tahay 16-ka bisha waxaan xaqiijinay kiiskii ugu horeeyay ee caabuqa Coronavirus, sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin oo dibadda ka timid oo lagu haayey ayrboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda, maadaama ay ka yimaadeen meelo uu aad iyo aad uga jiray caabuqan, waxaa laga qaaday baaritaan saakay ayaa jawaabtii naloo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba” ayey tiri Wasiirad Fowsiyo.
Dhinaca kale Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Fowsiyo Abiikar ayaa tilmaamtay in dadkan dhawaan la karaantiilay oo uu ku jiro shaqsiga maanta laga helay cudurka Coronavirus ay dhamaantood yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed.
Muddooyinkii dambe ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa ay walaac ka qabeen in xanuunka Coronavirus uu dalka soo gaaro taasi oo maanta dhacday.
Dowlada Soomaaliya oo si kumeelgaar ah u joojisay Duulimaadyada Caalamiga ah